မူလစာမ်က္္ႏွာ | အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလင္းျပျခင္း အစည္းအရံုး
နည်းပြ Mastery ၏နေအိမ်
တစ်ခုပိတ်ပင် certified ရရှိထားပြီးနည်းပြဖြစ်လာရန်နှင့် Master နည်းပြအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရ
အဆိုပါမှတဆင့်နည်းပြ Excellence ရန်သင့် Path ကို Expand ပိတ်ပင်9နည်းပြMasteries®
ပိတ်ပင်နည်းပြဒဿန၏အမာခံများ ကိုတုံ့ပြန်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပြ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ပိတ်ပင် certified ရရှိထားပြီးနည်းပြကြှမျးကနည်းပြ၏ကွဲပြားအရည်အသွေးတွေပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းယုံကြည် နှင့် အစွမ်းထက်, အပြုသဘောအတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ နည်းလမ်းများ။ ပိတ်ပင်နည်းပြ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ, ကွဲပြားခြားနားအသိုင်းအဝိုင်းမှကျူးလွန်နေကြသည် ပိတ်ပင်တန်ဖိုးများ သူတို့တပ်မက်ပူးပေါင်းနှင့်နည်းပြ၏အနာဂတ် Co-ဖန်တီးဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ကို join နှင့်အပြုသဘောတစ်ကြိမ်ကမ္ဘာကြီးကို ONE စကားပြောဆိုမှုပြောင်းပေးပါ။
အဆိုပါIAC®လက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကုမ္ပဏီများနှင့် client များသူတို့အနေနဲ့ပိတ်ပင်လက်မှတ်ရ Mastery Coach®သို့မဟုတ်မာစတာ Mastery Coach®ငှားရမ်းသောအခါ, နည်းပြအသေးစိတ်စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးကြယ်အဆင့်မှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်ကိုသိအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်စေ့စေ့စပ်စပ် one.That ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့အမြင့်ဆုံး caliber ၏နည်းပြများငှားရမ်းကြသည်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည် client ကိုပြောထားသည်အာမခံချက်၏ခိုင်လုံသောအတိုင်းအတာနှင့်အတူသူတို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည် အရည်အသွေးမြင့်နည်းပြ.
"ငါသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်သန့်စင်နှစ်ခုစလုံးပိတ်ပင်လက်မှတ်ခရီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပံ့ပိုးပေးထားသည့်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ် coached ခံရသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စမ်းသပ်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။ လေ့လာနေနှင့် Mastery ၏အသုံးပြုမှုအတွက်လက်မှတ်နက်ရှိုင်းငါ့ပညာအတတ်နှင့်အလေ့အကျင့်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ "
ဒေါက်တာဆာရာကွှေးမွညျတမျးကျောင်းအုပ်ကြီး, အလယ်တန်းကျောင်းပရဝုဏ်, အဆိုပါအဲလစ်စမစ်ကျောင်း
Mastery Practitioner, ပိတ်ပင် - မလေးရှား
"နည်းပြများနိုင်ငံတကာအစည်းအရုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းတိုးတက်မှုနှင့်ထူးချွန်၏တစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူမှု၏ဤပလက်ဖောင်းမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်ပြောင်းနည်းပြ၏သခင်သည်အသက်ရှင်ယုံကြည်မှုနှင့်ပွင့်လင်းတဲ့အာကာသကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးဂေဟစနစ်ဖြစ်၏။ "
Guilian G. အ Carlottiအလုပ်အမှုဆောင်နည်းပြများနှင့်ဘဝနည်းပြ
လက်မှတ်ရ Mastery နည်းပြ, ပိတ်ပင် - ချီလီ
"နည်းပြငါ့ခရီးတစ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ခေါင်းဆောင်သကဲ့သို့ငါ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အမြင့်မှာ 2006 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ငါ 2007 အတွက်ပိတ်ပင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး 2009 အတွက်လက်မှတ်ပြီးစီး။ ငါပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery foundationally လိုအပ်ဆုံးသောအရေးပါအရည်အသွေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြပြီ ထိရောက်သောနည်းပြဖြစ်။ အဆိုပါပိတ်ပင်ထောက်ခံပါတယ်အဆိုပါဆက်လက်အလေ့အကျင့်, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်အယောင်ဆောင်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းနည်းပြနောက်ဆုံးမှာနည်းပြ Mastery သုံးပြီးအတွက်မသိစိတ်အရည်အချင်းဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ "
Kathy ခရော, SPHR, MMC (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအ)CEO ဖြစ်သူပြည်သူ့ဖြစ်နိုင်သော LLC
မာစတာ Mastery နည်းပြ, ပိတ်ပင် - ယူအက်စ်အေ
ပိတ်ပင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိ